आलिसान रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने महलमा बस्ने सहसचिव चुडामणी शर्मा, समातिए !
ARCHIVE, SPECIAL » आलिसान रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने महलमा बस्ने सहसचिव चुडामणी शर्मा, समातिए !
काठमाडौँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व बिभागका महानिर्देशक चुंडामणी शर्मालाई पक्राउ गरेसंगै अहिले यो प्रकरणले निकै चर्चा पाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगमा दीप बस्न्यात प्रमुख आयुक्त भएपछि पहिलोपटक अप्रेसनका रुपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
यसो त उनको इतिहासपनि निकै विवादित छ । सम्पती शुद्धिकरणमा प्रमुख हुंदा शर्माका बिरुद्ध मुद्धा लागेपनि लोकमानसिंह कार्की प्रमख भएका बेला उनलाई प्रभावमा पारि बचेर कारबाही हुनपर्ने मान्छे बढुवा भई आन्तरिक राजश्व बिभागमा सरुवा भएका थिए ।
उनलाई रिमोट कन्ट्रोल समेत भएको आलीसान महलमा बस्ने सहसचिवका रुपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । अहिले विभिन्न करसम्बन्धि मुद्धामा उनलाइ अख्तियारले सोधपुछका लागि भन्दै पक्राउ गरेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।